Sisebenzise R650 000 ukubhalisa intsha emanyuvesi | News24
Sisebenzise R650 000 ukubhalisa intsha emanyuvesi
LIKHULA ngesikhulu isivinini isasasa lentsha eyofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme. Izinyanga zokuqala zonyaka zisuke zimatasa kakhulu ehhovisi labantu abasha ngoba ilapho intsha izofaka izicelo zokulekelelwa ukuze ibhalise ezikhungweni zemfundo ephakeme.
Lolu hlelo lokulekelela lwaba umbono wabantu abasha ngonyaka we-2009 lapho bebuka ukuthi iningi lentsha liphumelela kahle ibanga leshumi bese lihlala ekhaya ngenxa yokuntula imali yokuqhubeka nezifundo.
Umbono wawuthi ngoba lukhona uhlelo luka NSFAS uma sewungaphakathi esikoleni kuhle thina njengomasipala sibawezele ngaphesheya. Imali yaqala incane kunale eyiyo manje. Eminyakeni emibili edlule yayi-R450 000. Kwabonakala ukuthi ziningi izicelo ezigcina zingahlangabezekanga. Sabe sesiyikhuphula iba uR650 000. Impela lemali ibukeka iyiningi kodwa kunabantu namanje abangazange bathole usizo ngenxa yobuningi bezicelo.
Singuhulumeni sibona kubalulekile ukuthi silekelele izingane zingene ezikhungweni zemfundo ephakeme ukuze sihlangabezane nezidingo zezwe lonke. Kumanje izwe lethu lintula onjiniyela, ochwepheshe bemikhakha ethile ukuze ihlangebezane neNDP 2030 nama Millenium Development Goals. Luselude ukhalo esisazoluhamba ukufika ezicongweni kodwa konke kuqala kancane kuze kufike phezulu.
Kubalulekile ukuthi ngiphawule ngobudedengu obenziwa abantu abasha abafaka izicelo. Ezinye zezicelo ezingaphendulwanga ingoba azigcwaliswanga ngendlela futhi kukhona nemininingwane eshodayo. Noma ihhovisi labantu abasha selithintana nofake isicelo kube nhlanga zimuka nomoya. Siyanxusa ukuthi siqikelele ukuthi sigcwalisa kanjani ifomu lokufaka isicelo nanokuthi imiphi imininingwane edingekayo. Abanye abasifaki isicelo sokufunda ohlelweni lakwa CAO loko okwenza ukuthi kushode imininingwane. Njalo ngonyaka ihhovisi labantu abasha lihambela izikole ikakhulukazi amabanga eshumi ehambisa ama-CAO forms ukuthi bawagcwalise ngoba yilona hlelo olulandelwayo uma uhlose ukuyofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme. Siyanxusa ukuthi ake silandele yonke imininingwane ukuze sibe sesimweni esihle sokulekeleleka kuloluhlelo. Loku esikwenzayo njengomasipala sikwenza ukuhlangabeza umbono kazwelonke we-NDP 2030. Sinabo abantu abasha abaningi abahlomula ngokulekelelwa yilemali asebafunda baqeda basebenza. Njalo bahlale besikhumbuza ngokubaluleka kwaloluhlelo benxusa ukuthi singaluyeki ngoba mukhulu umehluko eliwenzayo ezimpilweni zabantu abasha.
Sisazoqhubeka nokusebenzisana ngokwethembeka.- UMeya wase Mzumbe uMnuz Sizwe Ngcobo.